Madaxweynaha Puntland oo Dowladda Nabad iyo Nolol ku canaantay fashilka amni ee Muqdisho – Somali Top News
Madaxweynaha Puntland oo Dowladda Nabad iyo Nolol ku canaantay fashilka amni ee Muqdisho
August 2, 2019 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa xukuumadda Federaalka Soomaaliya ku dhaliilay, in ay ku fashilantay Sugidda Amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Madxaweyne Deni ayaa sheegay in siyaasada Xukumadda Federaalka Soomaaliya, ay dalka u horseedday amni la’aan iyo xasilooni-darro, gaar ahaanna magaalada Muqdisho oo sida uu sheegay ay ku sii kordhayaan dilalka iyo qaraxyadda ka dhaca Muqdisho.
“Waa marag ma doonto ah in maanta siyaasadda cakiran iyo mudnaansiin la’aanta aarimihii muhiimka ahaa ay dalka u horseedeynabadgelyo xumo ka jirta goobo badan oo dalka ah. Waxaa kordhayfalalkii argagixo ee lagu beegsanayo shacabka” ayuu yiri Deni.
Sidoo kale, wuxuu xukuumadda ku eedeeyay in markii Al shabaab weeraro ka gaysato Muqdisho, ay Dowladdu ugu jawaabto wadda-xiris aan wax amni ah soo kordhin, balse culays iyo cadaadis horleh sii saarta Shacabka ku dhaqan Magaaladda Muqdisho.
“Waxaa kordhay falalkii argagixo ee lagu beegsanayo shacabka iyadoo dowladuna kagajawaabtay waddo xiris taas oo culays badan kusii noqotay shacabkii dhibannaa xal amnina aan keenin” ayuu hadalkiis sii raaciyay Madaxweynaha Puntland Siciid Deni.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka wada shaqeeyaan Dowladnimada iyo Wada jirka Umadda Soomaaliyeed.
“Waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba inaynu Ka wada shaqayno dowladnimadeena, wadajirkeena iyo midnimadeena. Waxaan ku soo gunaandayaa hadaylkayga soomaali waa soomaali, Soomaliyana soomaali baa leh” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Madaxweynaha Deni ayaa hadalkaaan ka sheegay Xaflad lagu xusaayay Sanad guuradii 21 aad ee aas aaska Maamulka Puntland oo xalay lagu qabtay Magaaladda Garoowe ee Caasimada maamulkaasi.
← Ciidamada dowladda Federalka oo la wareegay amniga magaalada Dhuusomareeb
United Nations in Somalia mourns death of Mogadishu mayor from terrorist attack injuries →
Somaliland oo ogolaatay in Baasaboor la’aan laga dhoofo Haregysa
Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta oo ka daah furey Caabudwaaq adeegyo lagu horumarinayo isticmaalka Teknolojiyadda
Saraakiisha Ciidanka Xoogga dalka oo la tijaabinayo qibradaha iyo aqoonta ay leeyihiin